Xalalka Iftiinka Muuqaalka | Huayi Lighting
Iftiinka muuqaalku maaha kaliya dejinta iftiiminta, waxay leedahay qiime farshaxan iyo qurux gaar ah oo hal shay ah. Aaggan farsamada Huayi waxay ku leedahay sumcad wanaagsan oo leh karti xirfadeed midho dhal ah iyo karti halabuurnimo.
Xirfadlaha Huayi ee wax soo saarka, rakibaadda, komishanka iyo dhismaha, xitaa waxay dejin kartaa naqshadaynta nidaamka iftiinka dhamaystiran. Awood u leh in ay horumariso software ee nidaamka xakamaynta iftiinka si loo hubiyo in mashruuc kasta oo nal ah oo ay qabato Huayi ay gaari karto ama ka badan karto waxa macmiilka laga filayo.
Kaliya noo sheeg shuruudahaaga, waxaan sameyn karnaa wax ka badan inta aad qiyaasi karto.